15.000 isa ireo naratra vokatry ny fandalovan’ny rivodoza farany teo, 17 no namoy ny ainy, 6.000 tsy manan-kialofana. Ny fahavoazana nateraky ny teo aloha anefa tsy tafarina akory.
Tsy misy tsy mahalala amin’izao fotoana fa miitatra amin’ny taona 2019 ny fifidianana ny filoham-pirenena handimby ny fitantanana indray izao vahoaka tsy mandady harona sy efa fadiranovan’ny fahantrana izao. Toy izany koa ny salan-taom-pahazoana misotro ronono eny anivon’ireo orinasam-panjakana satria dia lasa 65 taona vao voalaza fa afaka misitraka izany. Mbola mafana moa ny adihevitra na eny anivon’ny fiarahamonina na eny anivon’ireo haino aman-jery mikasika an’io fanapahan-kevitra io. Anisan’ny tsikera voalaza ny hoe malaina ny handoa vola ho an’ireny efa voky taona ireny ny fitondrana rehefa misotro ronono izy ireo. Mety malaina ny handray ireo tanora vao misondrotra sy avara-pianarana vaovao ihany koa satria tsy haharaka ny karama takian’ny tinadin’ny fisondrotry ny vidim-piainana iainan’ireo tanora ankehitriny ny tetibolam-panjakana ka dia aleon’ny fitondrana mampiakatra ireo ela nietezana satria tsy mandany vola. Fihetsika te hanitatra fitondrana no hita ataon’ireo mpitondra antsika ankehitriny. Saingy ny fanontaniana mipetraka dia hoe tsy tetezamitatra fa inona ?